» चिनियाँ अनुदानको भेरोसेल जेठ २५ बाट दिइने, ६० देखि ६४ वर्षका जेष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइने
चिनियाँ अनुदानको भेरोसेल जेठ २५ बाट दिइने, ६० देखि ६४ वर्षका जेष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइने
काठमाडौं । चीनले अनुदानमा दिएको कोभिड–१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप जेष्ठ नागरिकबाट दिन सुरु गरिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राप्त अनुदानको खोपलाई जेठ २५ गतेदेखि जेष्ठ नागरिकलाई दिन सुरु गर्ने भएको हो ।
पहिलो चरणमा देशभरका ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई चिनियाँ भेरोसेल खोप दिइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले बताए । उनले चीनबाट प्राप्त हुने १० लाख डोज खोपले ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई पुग्ने मन्त्रालयले आंकलन गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलकाअनुसार भेरोसेल खोप लगाउन खोप केन्द्रमा जाँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेर खुल्ने कुनै पनि सरकारी कागजात वा वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस अनिवार्य लिएर जानुपर्ने छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले सम्ममा ४ लाख ३५ हजार ११२ जनाले भारतीय कोभिसिल्ड र २ लाख ७९ हजार जनाले चिनियाँ भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन् । कोभिसिल्ड खोप लगाएका १३ लाख भन्दा बढी नागरिक दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेपनि खोप कहिले आउने हो कुनै ठेगान छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार पहिलो डोज खोप लगाएको ८ देखि १२ हप्ताकाबीचमा दोस्रो डोव खोप लगाउनु पर्छ । आपुर्तिको सुनिश्चितता नगरि पहिलो डोज खोप लगाईदिएका कारण १३ लाख बढी नागरिकको दोस्रो डोज खोप अन्यौलमा परेको छ ।
चीनले अनुदानमा दिएको १० लाखमध्ये ९ लाख डोज नेपाल आइपुगेको छ भने बाँकी एक लाख भोलि काठमाडौं आइपुग्नेछ । ८ लाख डोज खोप बेईजिङबाट सिधै काठमाडौ आईपुगेको छ भने बाँकी तिब्बतबाट बिस्ताबन्दीमा आउनेक्रम जारी छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ६० देखि ६४ वर्षका नागरिकको संख्या ८ लाख ५४ हजार छन् ।
यसपटक भने पहिलो डोज लगाउने ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई दोस्रो डोजको सुनिश्चितता हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।